प्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यथास्थिति र प्रतिक्रियावादी शक्तिले शान्ति प्रक्रिया भाड्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । एकिकृत माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दैलेखका पत्रकार असुरक्षित रहेको हल्ला फैलाएर शान्ति प्रक्रिया भाड्न खोजेको दावी गर्नु भयो ।
आज जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतको टोलीसहित बैतडी पुग्नु भएका प्रधानमन्त्रीले जनताले अभिमत दिएर १० वर्ष सरकार चलाउन पाए मात्रै जनतासंग गरिएका वाचा पूरा गर्न सकिने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वकालका घटनाका बिषयमा आफूहरु पनि गम्भीर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै घटनाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । माओवादीले हत्यारालाई संरक्षण गर्‍यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उहांले बिदेशबाट डलर ल्याएर खेति गरिरहेकाले यो षड्यन्त्र गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई बैतडी पुग्दा विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्दै कालोझण्डा देखाएका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएका विपक्षी दलका कार्यकर्ता र माओवादी कार्यकर्ताबीच केही बेर तनाव समेत भएको थियो । यसैविच प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई चढेको गाडीमा विपक्षी दलका युवा संगठनका कार्यकर्ताले ढुङगा प्रहार गरेका छन् ।
बैतडीबाट धनगडीमा आउने क्रममा प्रहरीको घेरा तोडेर अघि बढेको प्रदर्शनकारीले हानेको दुई वटा ढुङगा प्रधानमन्त्री चढेको गाडीमा लागेको हो । स्थानिय प्रशासनले प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका शिर्ष नेताहरुको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, दंगा प्रहरी गरी ठूलो संख्यामा सुरक्षकर्मी परिचालन गरेको थियो । एकिकृत माओवादीले सयौंको संख्यामा डडेल्धुरा र दार्चुलाबाट वाइसियल कार्यकर्ता समेत लगेको थियो ।
सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्टका नाममा एमाले र नेकपा माओवादीले जनता र राष्ट्रलाई धोका दिएको आरोप लगाउनु भयो । नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी नारा भट्टाएर जडसुत्रबादी सोचमा अघि बढेको र प्रतिक्रान्तिको सेवा गरेको उहाँको आरोप छ । प्रचण्डले नयाँ क्रान्ति आवश्यक भएकाले कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन दिनु भयो । उहाले स्थानियस्तर देखि नै हस्तक्षेप गरेर बाँकी क्रान्ति पुरा गरिने बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा अर्का उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजि श्रेष्ठले कांग्रेस–एमाले जस्ता पार्टीहरुका कारण मुलुकमा सहमति कायम हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरुले महाधिवेशनपछि पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने प्रतिवद्धा जनाएका छन् । ।
यसैबिच, जिल्ला अधिवेशन लागि माओवादीका शीर्ष नेतृत्व बैतडी आउने भएपछि विपक्षीदलले जिल्ला बन्दको आह्वान गरेका थिए । यहि माघ २० देखि २५ गतेसम्म मकवानपुरको हेटौडामा हुने महाधिवेशका लागि प्रतिनिधि चयन गर्न यहि माघ १६ गते सम्ममा सबै जिल्ला सम्मेलन सक्ने माओबादीको तयारी छ ।